Maalinta berito ah oo la filaayo in la shaaciyo Magacyada Xubnaha Cusub ee Barlamaanka – idalenews.com
Maalinta berito ah oo la filaayo in la shaaciyo Magacyada Xubnaha Cusub ee Barlamaanka
Guddiga Farsamada ee soo Xulista Barlamaanka ayaa sheegey in maalinta berito ah soo bandhigi doonaa magacyada xubnaha ka mid noqonaaya barlamaanka cusub ee Somalia. Waxay sheegeen ineysan wada hayn 275 xubnood ee ay ahayd iney guddiga helo hase ahaatee hayaan tiro kor u dhaafeysa 225 xubnood oo suurtogalin karta in barlamaanku fadhigiisa ku qabsan karo howlihiisa 1aad guda geli karo.
Waxay kaloo kula dardaarmeen in beelaha kale ee aan weli soo gudbin xubnahooda iney keenaan ilaa maanta oo talaado ama ugu dambeyn beri oo Arbaca ah ugu dambeyn si tirada guud ee 275 ee lagu heshiisey u dhameystiranto.
Wakiilka gaarka ee Soomaaliya Augustine Mahiga, Xukuumada Ra’iisul Wasaare Abdiweli iyo Madaxweynaha Shariif Sheikh Ahmed ayaa intuba waxay ku baaqeen in la degdegiyo soo xulista barlamaanka isla markaasna bishaan 15keeda la shaaciyo magacyada xubnaha ka mid noqonaaya barlamaanka.
Bisha August 20keeda ayaa ah xiliga ay ku eg tahay jirintaanka dowladda hadda jirta sidaas darteed dad badan oo Soomaaliyeed shaki ka muujinayaan sida ay suurtagal ku noqon karto in la qabto doorasho Madaxweyne iyadoon aan weli la helin xubnihii barlamaanka ee howlaha dhameystirka kala guurka u ahaa gundhigga.
Walaaca AU ka muujisey cabsigelinta laga haayo Guddiga Farsamada ee Soo xulista Barlamaanka
Dowladda Turkiga oo Kuliyad Caafimaad ka dhiseysa magaalada Muqdisho